Arsenal Oo Heshay Saxiixii Ugu Horreeyay Xagaaga – Garsoore Sports
Arsenal Oo Heshay…
Kaddib markii laga reebay tartanka Europa League, waxay u muuqataa in Gunners aysan cayaari doonin kubbada-cagta Yurub markii ugu horreysay rubuc qarni xilli-cayaareedka soo socda.
Sidaa darteed Mikel Arteta ayaa qorsheynaya dib u habeyn ballaaran oo uu ku sameynayo kooxdiisa isagoo horey u ballanqaaday inuu noqon doono mid aan naxariis laheyn xilli uu doonayo inuu kooxdiisa u wareejiyo wajiga xiga ee mashruuciisa garoonka Emirates.
Haddaba Arteta ayaa sida wararku sheegayaan durbaba billaabay soo xero-gelinta saxiixiisa ugu horreeya ee xagaaga iyadoo Gunners ay qarka u saarantahay inay dhammeystirto heshiiska ay kula soo wareegeyso xiddiga khadka-dhexe ee kooxda Brighton Yves Bissouma, kaasoo u saxeexaya heshiis 4 sanno ah.
Kooxda ka dhisan Waqooyiga London ayaa Brighton kula heshiisay adduun lacageed gaaraya 35 milyan oo Yuuro si ay u helaan xiddigan u dhashay dalka Mali.
Bissouma ayaa xilli-cayaareed wacan ku qaatay garoonka Amex Stadium ee kooxda Brighton & Hove Albion balse waxa uu markan doonayaa inuu xirfadiisa cayaareed sii horumariyo uuna usoo wareego dhinaca Gunners.
Arsenal ayaa saxiixa xiddigan u aragta mid muhiim ah maadaama khadka dhexe ee kooxda uu ahaa mid aan tayo sarre lahayn xilli-cayaareed yadii ugu dambeeyay, iyadoo saxiixa Thomas Partey aanu keligii wax ka tarin khadka dhexe ee kooxda.
Sidaas oo ay tahay ayuu tababare Arteta doonayaa inuu Thomas Partey iyo Granit Xhaka oo haatan ka atooreeya khadka dhexe Arsenal kusoo kordhiyo cayaaryahan kale oo tayo sare leh.